Ny lahatsoratr'i Taylor Chrisman momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Taylor Chrisman
Taylor Chrisman dia ao amin'ny ekipa Marketing Marketing ao amin'ny Marketing nomerika matanjaka. Mafana fo izy ny milaza tantara amin'ny marika amin'ny alàlan'ny votoatin'ny fifandraisana sy ny fandraisana anjara ary ny sehatra media sosialy.
Taylor dia zokiolona ao amin'ny University of San Diego mianatra Marketing.
Alatsinainy, Septambra 26, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Taylor Chrisman
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Snapchat dia nitombo hatrany amin'ny 100 tapitrisa mahery eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny horonantsary maherin'ny 10 lavitrisa nojerena isan'andro. Miaraka amin'ny isan'ny mpanaraka marobe amin'ity rindrambaiko ity isan'andro, dia gaga ny orinasa sy ny mpanao dokambarotra mirohotra mankany Snapchat hanao dokambarotra amin'ny tsenany lasibatra. Ny Millennial dia misolo tena ny 70% n'ny mpampiasa rehetra ao amin'ny Snapchat Miaraka amin'ny fandanian'ireo mpivarotra 500% bebe kokoa amin'ny millennial noho ny hafa rehetra, ny